Shirkii Nabadda ee Qabridahare oo Furmey iyo 900 oo kaqaybgashey |
Ethiopia Somali News Agency
Shirkii Nabadda ee Qabridahare oo Furmey iyo 900 oo kaqaybgashey
Qabridahare (NogobNews)03/10/2010, Shir si wacan loo soo abaabulay ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Qabri-Dahare ee gobolka Qoraxeey. Shirkan ayaa ujeedadiisu ahayd sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dhamaan wadanka Ethiopai gaar ahaan gobolada ay degan yihiin Soomalida. Shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay isimada dhamaan sagaalka gobol ee hoos yimaada Dowlada Deegaanka Soomalida, qurbajoogta, mas’uuliyiinta ururka ONLF, Dowlada Deegaanka Soomaalida, iyo suxufiyiin badan. Gogosha shirkan ayaa waxa fidiyey dadka degan magaalada Qabri-Dahare, oo runtii si fiican u soo dhaweeyey martida shirka oo ka badan 900 boqol oo qof in ka badan.
Shirkan ayaa waxa uu soconayaa in ku dhuw tobon maalmood, laguna gorfeyn doono waa maxay nabad, yaa ka faa’ida nabada, sababta loogu baahan yahay nabad, yaa naabad keeni kara, ma la heli karaa hormar, nabad la’aan. Qaybtee ka ka qaadan karaan odayada nabada, iyo uruka ONLF ma keeni kartaa naabad warta.
Gudoomiyaha ururka ONLF, Enj, Saalaxdiin Macow ayaa waxa uu shirka ka soo jeediyey sooyaalka nabada iyo qiimaha ay leedahay isagoo ku dheeraaday marxaladihii ay soo martay ONLF iyo siday ay diyaar ugu tahay nabada. Intii uu gudoomiyaha hadlayey ayaa wajigiisa waxa ka muuqday shucuur, maadaama uu soo maray gobolo badan uuna ku arkay sida shacabku uu ugu baahan yahay nabada.
Sidoo kale waxa shirka ka hadlay Madaxweynaha Dowlada Deegaanka Soomalida, mudane Abdi Maxamed Cumar, oo ka hadlay sida loogu soo dhaweeyey Qarbi-Dahare, kuna tilmaamay in ay shacabku hamuun u qabaan dowladnimada, sidoo kale waxa uu ka hadlay in uu ku faraxsan yahay nabada ay wadaan ururka ONLF. Ugudanbeyntii, madaxweynaha ayaa ku guubaabiyey qurbajoogta in ay ka shaqeeyaan nabada, runta ay ka sheegaan horumarka ka socda gobolada.
Gudoomiyaha Xisbiga Abdifatax Sh. Abdullahi, oo ka hadlay marxaladihii uu soo maray heshiisiinta ONLF iyo Dowalada. Isagoo ku amaanay geesinimadii ay ku dhiiradeen ururka ONLF in ay nabada qaataan. Ugu danbeyntii ayaa shirkan waxa ka hadlay qurbajoogta iyo odayo dhaqameedada. Dadweynihii shirkan ka soo qayb galay ayaa waxa ay yiraahdeen waa shirkii ugu horeeyey ee ka dhaca Qabri-Dahare oo ay isgigu yimaadaan dad intaa tiro le’eg.
Warkii ESTV Maalin Kasta Ka Daawo Nogobnews